Fanontaniana napetraka matetika - ASFO Store
Inona no tombontsoa amin'ny fividianana an-tserasera?
Betsaka ny tombony azo amin'ny fividianana an-tserasera: azonao atao ny manao ny fividiananao amin'ny fotoana rehetra na andro (24 ora / 7 andro isan-kerinandro / 365 andro isan-taona); Fandefasana ny vokatra arosonao ao an-trano na any amin'ny adiresy izay ilainao; Ny vidiny mora sy ny fahafahana miavaka ahafahana miditra amin'ny fampiroboroboana manokana Amin'ny alàlan'ny angona ataontsika, ary aorian'ny fividiananao voalohany dia manamora ny fividianana ny fividianana amin'ny ho avy.
Ilaina ve ny misoratra amin'ny tranokala hanao fividianana?
Tsia. Tsy voatery ny fisoratana anarana fa hitondra tombony manokana ho anao izany! Fandraisana amin'ny fampielezan-kevitra sy tolotra manokana: hahazo tapakila, tolotra, fihenam-bidy ary vaovao amin'ny mailaka fisoratana anarana ianao! Fividianana haingana kokoa: fenoy indray mandeha fotsiny ny fikaonanay ho mpikambana, amin'ny fividianana ho avy na ho voasoratra ho azy ny angon-drakitrao. Tantara momba ny baiko: azonao atao ny manamarina hatrany ireo fividianana nataonao.
Inona no azoko hividianana?
Manome varotra ny vokatra rehetra mazàna misy any amin'ny pharmacies izahay: fanafody fanafody; Ny fanafody tafahoatra, vokatra vita amin'ny kosmetika sy fidiovana, kojakoja famatsiana sakafo, orthopedika. Raha tsy hitanao izay ilainao, azafady mifandraisa aminay!
Mandefa invoice ve ny fivarotana? Raha tsy hitanao izay ilainao, azafady mifandraisa aminay!
Amin'ny baiko tsirairay dia alefa ny invoice amin'ireo vokatra novidina.
Ahoana no ahaizako antoka fa voaray ny baiko?
Rehefa vita ny baikonao, hahazo valiny mandeha ho azy ianao izay mampahafantatra anao fa efa mandeha ny fizahana.
Azo atao ve ny mandray ny baiko amin'ny adiresy hafa amin'ny adiresy faktiora?
Eny. Mandritra ny tohin'ny fividianana dia toy izao manaraka izao: Eo amin'ny pejy izay tapitra ny fividianana dia misafidy ny safidy "Alefaso adiresy samihafa" Amin'ity fomba ity dia afaka miova ianao ary manondro ny adiresy tianao handraisana ny baikonao. Ity fomba ity dia tsy manova ny adiresy faktiora.
Misy ve ny sandan'ny baiko ambany indrindra?
Tsy misy ny sanda filaharana ambany indrindra.
Ahoana no ahalalako ny sandan'ny vola laniko?
Rehefa tapitra ny fividianana fividianana, ary raha ny vokatra / fanafody maivana tsy misy fanafody, dia manome vaovao ny sanda ny karama, izay misy fiakarana sy postage (raha ilaina) raha toa ka mahazo fanafody tsy maintsy aloa. Aorian'izay dia mandray mailaka miaraka amin'ny sandany farany ianao, izay hahitana fiaraha-mientana sy fihenam-bidy.
Azo antoka ve ny fanaovana fandoavam-bola ho an'ny tranokala? Voaro ve ny angon-drakitra manokana?
Ny farmasia Sousa Torres SA dia manaraka tsara ny politika manokana momba ny fiainana manokana. Tsy ho eo ambanin'ny toe-javatra rehetra nomena ny ankolafy ny angon-drakitrao raha tsy misy ny fahalalanao sy ny fanekenao. Ny fampiasana ny endrika https: // dia manome antoka ny fiarovana ny fandefasana ny vaovao sy angona an-tserasera.
Azoko atao ny mandoa amin'ny fomba izay toa tsara indrindra amiko?
Amin'ny fiheverana fa ny fomba fandoavam-bola dia miankina amin'ny fomba fandefasana voafidy, ao anaty safidy azo aloa, azonao atao ny misafidy izay mety indrindra aminao.
Milamina ve ny aloa amin'ny carte de crédit?
Rehefa mameno ny fampahalalana momba ny fandoavam-bola ianao, misy rohy azo antoka eo anelanelan'ny browser sy Hipay, ilay orinasa manao ny fifanakalozana fandoavana. Azo antoka ny mpizara ampiasaina, miaraka amina encryption mafy, ahafahana miantoka ny fiarovana ny angon-drakitra fandoavam-bola raha vao alaina izy ireo. Ao amin'ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny carte de crédit dia hangatahana ny anaran 'ny tompon-karatra, ny daty lany daty dia fehezan-dalàna fiarovana, hita ao amin' ny andalana karatra, eo ankavanan'ilay sehatra voatokana ho an'ny sonia karatra. mpihazona, ahitana laharana telo, ny CVV (kaody fanamarinana). Atao azo antoka kokoa ity fomba fividianana hividianana ity, dia mila izany isika, amin'ny fampiasana carte de crédit, antsoy ny laharana 3 na 4 momba ny fiarovana (CVV). Satria ny kaody dia ampahany ao anaty karatra, ny fikasana fetsifetsy rehetra dia voasakana soa aman-tsara.
Ahoana no hanafoanana ny baiko?
Raha sendra mikasa ny hanao izany ianao, dia ataovy haingana araka izay azo atao. Mba hiantohana ny fanafoanana, dia tsy maintsy miantso ny Mpanohana ny mpanjifa ianao mba hanamarina raha mbola amin'ny fandefasana. Raha ny tokony hamoahana azy dia tsy azo atao ny mandinika ny fanafoanana.